Kaddib Petr Čech, sidee loogu kala guuleystay abaal-marinta gacamo-gashiga dahabka ah ee Premier League (Premier League Golden Glove)? – Gool FM
Kaddib Petr Čech, sidee loogu kala guuleystay abaal-marinta gacamo-gashiga dahabka ah ee Premier League (Premier League Golden Glove)?
(London) 18 Maajo 2016 – Goolhayaha kooxda Arsenal Petr Cech ayaa markii 4-aad ku guulaystay abaal-marinta gacmo-gashiga dahabka ah ee Premier League, (Premier League Golden Glove) kaddib markii uu shabaqiisa gool ka ilaashaday 16 kulan.
Goolkii xalay uu iska dhaliyay Chris Smalling ayaa ku qasbay goolhayaha Man United David De Gea inuu isaga haro tartanka abaal-marintaan, waxaana si rasmi ah ugu guulaystay goolhayaha Arsenal ee Petr Čech.
Haddaba waxaan eegeynaa sidii abaal-marintan gacmo-gashiga dahabka ah loogu kala guuleystay tan iyo markii labilaabay xilli ciyaareedkii 2004-2005.
Goolhaye Petr Čech ayaa noqday ciyaaryahankii ugu horreeyey, isla markaana ugu dambeeyey ee ku guuleystay abaal-marintan, maxaa yeelay waxa uu hantay xilli ciyaareedkii ugu horreeyey markii labilaabay 2004-2005, sidoo kalena xalay ayuu xaqiijiyey inuu ku guuleystay abaal-marintan xilli ciyaareedkan 2015-2016.
Joe Hart oo ka tirsan Man City iyo kan Arsenal ee Petr Čech ayaa ah goolhayeyaasha ugu badan ee hantay abaal-marintan Golden Glove waxaana ay kuwada guuleysteen min afar jeer, Čech ayaana xalay barbareeyey Hart.
Qaabka loogu kala guuleystay abaal-marinta Premier League Golden Glove
Haddii aynu koox ahaan u eegnana abaal-martintan waxaa ugu badan Manchester City oo uu goolhaye Hart kula guuleystay afar jeer, Chelsea oo saddex jeer uu la qaaday Čech, Liverpool oo uu Pepe Reina kula guuleystay saddex jeer, Arsenal oo ay labada goolhaye ee Wojciech Szczęsny iyo Petr Čech kula guuleysteen min hal jeer iyo Manchester United oo uu hal jeer la qaaday goolhaye Edwin van der Sar.
Kabtan Wayne Rooney oo noqday xiddiga labaad ee garoonka kooxdiisa goolasha ugu badan ku dhaliyey Premier League… (Yaa ka sarreeya?)
DAAWO: Thiery Henry oo sheegay in Arsenal ay diirada saarto hanashada horyaalka halkii ay u dabaal degi lahayd ka saramarida Tottenham!